May 15, 2021 Xuseen 12
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Somaliland ayaa sheegtay inaan Beelaha Hawiye ka codeyn karin dalka maadama oo aanay u dhalan.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaraddaasi ayaa hadalkaan yidhi isagoo ka jawaabaya kaddib markii odayaal dhaqameed iyo dadweyne kale oo ka hadlay Burco kana soo jeeda Beelaha Hawiye ay sheegeen inay Murashaxiin Burco ka sharaxan ay u codeynayaan.
“Qof aan u dhalan Somaliland ma codeynayo, way iska hadlayaan, ka soo kaxaystayna wuu iska hadlaya. Waannu ku daba jiraa maalamaha soo socdana talaabo ayaanu ka qaadaynaa ku waxaas leh.” Ayuu yiri wasiirku.
Doorashada Golaha Deegaanka Soomaaliland ayaa dhacaya dhamaadka bishaan oo taariikhdu ku beegan tahay 31-ka May,taas oo diyaar garoow badan lagu jiro.
Kkkkk Soomaaliland waa loo dhashaaye laguma dhasho miyaa sheekadu!!!
Oo soow lama lahayn FIQI SHINI oo Hawiye ah ayaa deegaan ku ah? Kkk
Waxay ka mamnuucday , beeel daarood ah oo Tuuga ah.
Fiqi shini.. waa Asal Somaliland waana hawiye.
Laas caanood, waxaa ka codaynaya Fiqi shini iyagaa leh ka madax ah, waa Muwaadiin Somalinder ah
Waa intifaalladeenii oo siisocota. Dooddaadii ugudambeysay waxaa laga dhadhansanayay inaad magaca ‘Soomaaliya’ xataa Talyaaniga kunisbeysay oo aad ku andacootay inuu isagu dalka kusummadeeyay, waanan kaxumahay inuu waxaasu yahay borobagaan iyo dacaayad xaqiiqooyinka dhabta ah aad ugafog oo ay jabhadda SNM iska allifatay.
Aan waxyar kaagabidhaamiyo haddaba: magacyada waddamada adduunka waxaa lagu nadqiyaa Afka Laatiiniga (Latin), kaasoo luqadaha Yurubiyanka kuwooda ugucaansan – sida Englishka, Fraansiiska, iyo Talyaaniga – dawliilka guud u noqday oo uuna ka unkanyahay. Sida Laatiinka waafaqsanna, dalalka magacyadooda waxay kudhammaadaan xarfaha “ia”, sidaas ajligeedana ayuu magacan “Somalia” kusoobaxay kadib markii suraabkaas la yagleelay.
Dooddiinna ah British Somaliland “dal gooni ah” ayuu ahaa markii gummeysteyaasha carro Soomaaliyeed laga eryayay iyana waa mid aan xaqiiqooyinka taariikheed waafaqsanayn, waayo markii uu Ingiriisku go’aansaday inuu Woqooyiga kabaxo wuxuu go’aankaasa lawadaagay quwadaha kale ee Yurubiyanka ahaa iyo Qaramada Midoobay. Waxayna kuheshiiyeen qaabkii affarta cisho ay udhexeeyeen ee ay Woqooyi iyo Koonfurba “xornimadooda” kusiyeen.
hooyadaa snm baa wasta
Dad badan baa qodobkan qariibsan doona, laakiin mar baa mandiqadda Soomaaliyeed dhammaanteed “Somaliland” looyaqiinnay intii ay Yurubiyanku qorsheynayeen sidii loogawada dulkici lahaa. Xataa markii labada ay Soomaalidu Woqooyi iyo Koonfur u aqoonsantahay igmashada Qaramada Midoobay (Trusteeship) lahoosgeeyay (1950 – 1960) waxaa rasmi looguyaqiinnay “Somaliland”.
Inuusan Ingiriis dal magacaas wata oo gooni utaagan meesha kagateginna waxaa daliil buuxda u ah igmashadaas kumeelgaarka ahayd ee 1960 ku ekayd. 4tii cisho ee uu Woqooyigu Ingiriisku fasaxay waxay ahayd muddo kumeelgaar ahayd ee Koonfurta lagu simayay. Waxaana sidaas go’aankeeda lahaa dhammaan odayadeennii Soomaaliyeed oo qaran qura oo Soomaaliyeed ay qaddiyaddoodu iyo himiladooduba ahaayeen.
Isticmaarkii hortiina, mandiqadda Soomaaliyed MID QURA ayay ahayd oo ay Soomaalidu labo siyaabood iskugumaamuli jirtay: (i) nadaam saldaneed (ii) nadaam xeer-dhaqameed. Waynu siiwadan doonnaa haddii uu Rabbi Idmo, waana intifaallo cid kasta oo xiiseynaysa oo wadajirka ummadda Soomaaliyeed daneysnaysa ufuran.
Hawiyaha Burco & Hargaysa jooga, waxaa dhaanta OROMADA Muqdisha joogta miyaa laga wadaa?!
Waxa aan filayaa sidaas maaha ee iyaga ayaa HAWIYUHU layn khaldan galay (WADANI). Xisbigii LOOMA OOYAANKA ahaa ee HABAR-YOONISTAY galeen, laakiin haddii ay gelilahaayeen xisbiga KULMIYE ee beesha HABAR-AWAL horboodaso cidi lama hadasheen baan filayaa. Waxa kale oo la xaqiijinyaa in xisbiga Kulmiye ee beesha H.A. ay xitaa OROMO ku jidho.
Gunaanadkii, Hawiyaha reer Burcoow, idinkaa layn khaldan galaye laynka saxda.
Marqaan news Cunsriyada naceybka shid sidii COVID 19 dad isku ciyaaraya!
Marqaan nacaladi kugu dhacdey! Dhimo umada aad isku direyso jooni nacaldi idinku dhacdey e!
Fake News!!! Dadka degan Somaliland waa la yaqaan. Dhamaan qabiilada Somaliland degan; Dhulbahante, Fiqi Shine, Warsangeli, Ciise, Samaroon, Madhibaan, Carab, Hindi & Isaaq xaquuq uu leeyahay qofkaas muwaadinka ah. Si toos ah ayayna codkooda u dhiibanayaan.
Ku bishaareysta saaxiibayaal xaqiiqadan. Ma jiro qof aanan muwaadin aheyn oo qaadan kara kardhka muwaadinka. Qof aanan Kaardhkii muwaadinka heysana ma qaadan karo ka codeynta. Kkkk
Kolkaas wax meesha la buunbuuniyaa ma yaalaan.
Dadkiinan isku dirka wadaa idiin shaqeyn meyso. Huuhaada nagala fadhiista.
Ciid mubaarak gidigiinba. Waannlasoo daahay laakiinse maafii mushkila.